Fashion – Page5– OOTDMYANMAR
THE BEST LUXURY SHOES TO INVEST IN- ON YOUR FIRST PURCHASE
No Comments on THE BEST LUXURY SHOES TO INVEST IN- ON YOUR FIRST PURCHASE
ပထမဦးဆုံးဝယ်ယူမှုမှာ ပေးရတဲ့ဈေးနဲ့တန်တယ်လို့ခံစားရစေမယ့် luxury ဖိနပ်များ
When it comes to purchasing designer shoes, it is best to forego trends and opt for the classics that can be worn season after season.
ဒီဇိုင်နာထုတ်ဖိနပ်တွေကို ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ခေတ်စားနေတဲ့ပုံစံနောက်ကိုမလိုက်ဘဲ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ရိုးမသွားမယ့် classic ပုံစံမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
And like what Marilyn Monroe once said, “Giveagirl the right shoes and she can conquer the world.” So, if you’re planning to purchase your first designer shoes investment, here are six designer shoes to consider.
မာရီလင်မွန်ရိုး ပြောခဲ့သလိုပဲ “ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို သူမနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံသာပေးလိုက်ပါ။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသိမ်းပြပါလိမ့်မယ်” တဲ့ ။ ကဲ.. အဲ့ဒီတော့ ဒီဇိုင်နာထုတ်ဖိနပ်တစ်ရံကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီး စိတ်တိုင်းကျစေမယ့် ဖိနပ်အမျိုးအစား ခြောက်မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 Christian Louboutin Pigalle courts
Photo Credits to Christian Louboutin
#2 Manolo Blahnik Hangisi pumps
Photo Credits @Manolo Blahnik
#3 Chanel espadrilles
Photo Credits @Chanel
#4 Hermés slider sandal
Photo credits @Hermès
#5 Gucci Horsebit loafers
Photo credits @gucci
#6 Dior J’Adior Slingback Pumps
Photo Credits @dior
Tags Fashion, ootdmyanmar, shoes
No Comments on NEWSPAPER/MAGAZINE CHALLENGE
I know there’salot of you out there struggling with what kind of photos to post due to travel restrictions. Since travel trips aren’t happening now, thinking creatively to shoot new content isaMUST.
ခရီးသွားခွင့်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ဘာပုံတွေတင်ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားရခက်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုကာလမှာ ခရီးသွားပြီး ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ အဆင်မပြေတဲ့အတွက် ဖန်တီးမှုကောင်းကောင်းနဲ့ ဓာတ်ပုံအသစ်အဆန်းတွေရိုက်ကြည့်ဖို့ စဉ်းစားသင့်တယ်နော်။
So here is an instagram trend you can do right now — use magazine/newspaper as your background.
အခုတလော instagram မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ဖန်တီးမှုလေးကို လိုက်လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ သတင်းစာ ၊ မဂ္ဂဇင်း တွေကို နောက်ခံအဖြစ်ထားပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
So here are5quarantine-magazine content ideas for Instagram post:
အားလုံးလည်း Instagram မှာ ခေတ်မီနိုင်ဖို့အတွက် quarantine-magazine content ငါးခု ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
#1 THE BOOK WORM
Photo credits @thethetnyein & @dgrazon
#2 SHOW SOME SKIN
Photo credits @sandy_shoon & @lissakahayon
#3 NEWSPAPER PLAY
Photo credits @lissakahayon & @dgrazon
Photo credits @esmeraldakyalphyu & @kristine_eri
#5 JUST WOKE UP
Tags Fashion, ootd, photography, quarantine, tip, tips
THE DRESS THAT WILL HEAT UP YOUR SUMMER
No Comments on THE DRESS THAT WILL HEAT UP YOUR SUMMER
+CREATED WITH MDS Myanmar
If you want your summer dress to be as hot as the weather we’ve got you. This dress definitely is guaranteed to makeastatement.
အထာကျပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိစေမယ့် နွေရာသီ နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဝတ်စုံများ ကိုယ့်ရဲ့နွေရာသီဝတ်စုံလေးကို ကိုယ့်လိုပဲ အထာကျပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကူညီပေးဖို့အသင့်ပါပဲ။
This Edena Ruffled-Hem Dress is only 59,000 KS
Make sure to shop before May3and get 30% off.
ဒီဝတ်စုံလေးတွေက အားလုံးနဲ့လိုက်ဖက်မယ်လို့ အာမခံပါတယ်။ ၅၉၀၀၀ ကျပ် သာကျသင့်မယ့် Edena Ruffled-Hem ဝတ်စုံကို မေလ ၃ ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာ ဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ဈေးနဲ့ရဦးမှာနော်။ တစ်ခြားဒီဇိုင်းတွေကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။
For more pieces you can shop here:
Model: Thazin Nwe Win
Make up by: Khaing
Styled & Shot by: Joamar-John
Tags Fashion, mdsmyanmar, thazinnwe
7 WAYS ON HOW TO WEAR YOUR COMFY OVERSIZED WHITE T-SHIRT AT HOME
No Comments on7WAYS ON HOW TO WEAR YOUR COMFY OVERSIZED WHITE T-SHIRT AT HOME
အိမ်မှာနေရင်း သက်သောင့်သက်သာရှိတဲ့ အဖြူရောင်တီရှပ်အပွနဲ့ စတိုင်ထုတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်း ၇ မျိုး လူတိုင်းမှာ ကိုယ်အရမ်းသဘောကျတဲ့ အဖြူရောင်တီရှပ်အပွ တစ်ထည်စီတော့ပိုင်ဆိုင်ထားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီကာလအတွင်းမှာ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ခွင့်ရထားတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ တီရှပ်အပွနဲ့ ဘယ်လိုစတိုင်ထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Worf From Home ကာလမှာ အိမ်ကနေအလုပ်လုပ်ရင်း အထာကျနေစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဖက်ရှင်စတားတွေဆီကနေ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
Admit it. Most of us have that staple oversized white T-shirt we trust and we adore. If you’re lucky enough to be working from home, we’ve got ways on how to make your overused white tee fashionable.
Presenting to you eight chic ways you can style it foraproductive work from home inspired by cool Burmese fashionistas.
#1 Pair it withabaggy pants. The baggier the better.
Photo credits @racheltayza
#2 Match it withajeggings. To contrast the texture.
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကို သိသာကွဲပြားစေဖို့ အသားကပ်ဂျင်းဘောင်းဘီတွေနဲ့ တွဲဝတ်ပါ။
Photo credits @msenglu
#3 Tie the knot with your denims. Yes, show some skin.
ဂျင်း နဲ့တွဲဝတ်ပြီး တီရှပ်ကို ခါးမှာ ဗိုက်သားပေါ်ရုံ ခပ်မြင့်မြင့်လေးချည်ပါ။
Photo credits @maygraceparry
#4 Wavy hair don’t care. Keep it flowy like your hair.
လှိုင်းတွန့်ဆံပင်လေးတွေကျောမှာချထားသလို တီရှပ်ပွပွလေးကိုလည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ အလိုက်သင့် တွဲဖက်မှုရှိပါစေ။
Photo credits @yunwaddy
#5 White-on-white. Sporty and comfy, baby!
အဖြူ နဲ့ အဖြူ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ပါ။ အားကစားဝတ်စုံတွေက ပိုပြီးသက်သောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။
Photo credits @amerylym
#6 Pleated white skirt. Because all white is the bomb.
စကပ်အဖြူ အထပ်အထပ် ကလေးတွေနဲ့တွဲဝတ်ပါ။ အပေါ်အောက် အဖြူတွဲဖက်ဝတ်ဆင်ခြင်းကလည်း စတိုင်ကျစေပါတယ်။
Photo credits @mxhpone
#7 Sneaker ready. It’s all aboutastatement sneakers.
Sneaker တွေ အသင့်ပြင်ထားပါ။ statement sneaker လေးတွေနဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
Photo credits @pippa.cameron
Tags Fashion, ootdmyanmar, tshirt
COUPLE TATTOOS FOR A STRONGER RELATIONSHIP
No Comments on COUPLE TATTOOS FOR A STRONGER RELATIONSHIP
“As the ancient proverb says, couples who tattoo together stay together.”
So we’ve curated couple tattoos you can have after this COVID-19 is over.
ချစ်သူစုံတွဲတွေအတွက် ခိုင်မြဲတဲ့အချစ်ခရီးလမ်းကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် စုံတွဲတက်တူးလေးတွေ
ရှေးဟောင်းစကားပုံတွေအရဆိုရင်တော့ စုံတွဲတက်တူးထိုးထားတဲ့ သမီးရည်းစားတွေရဲ့ အချစ်သက်တမ်းက ပိုခိုင်မြဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ COVID-19 ကာလကြီးပြီးသွားရင် ဆင်တူထိုးဖို့အတွက် စုံတွဲတက်တူးလေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Tags Fashion, ootdmyanmar, tattoos
6 KOREAN TRENDS YOU CAN WEAR AT HOME
No Comments on6KOREAN TRENDS YOU CAN WEAR AT HOME
Korean fashion is definitelyabig wave especially to the K-POP & K-Drama lovers out there. And if your trip to South Korea got cancelled because of the COVID-19. The good news is, we can just cop their trends to feel the Korean vibes we are longing for. All we need to do is look at our favorite Korean stars for #stayhome OOTD inspo!
ကိုရီးယားဖက်ရှင်တွေက K-POP နဲ့ K-DRAMA ချစ်သူတွေကြားမှာ အတော်လေး လွှမ်းမိုးမှုရှိနေပါတယ်။ ကိုရီးယားခရီးစဉ် ကိုစီစဉ်ထားပေမယ့် COVID-19 ကြောင့် မသွားဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း အိမ်မှာနေရင်း ကိုရီးယားအငွေ့အသက်လေးတွေရအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လို #stayhome outfit တွေဝတ်ရမလဲဆိုတာလေ့လာဖို့အတွက် OOTD က အကြိုက်ဆုံးကိုရီးယားကြယ်ပွင့်တွေရဲ့ ဝတ်စုံတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
Photo credits @skuukzky & @hi_sseulgi
Photo credits @daraxxi
Photo credits @jennierubyjane
Photo credits @hyominn
Photo credits @hyunah_aa
4 THINGS TO DO WHILE YOU #STAYATHOME
No Comments on4THINGS TO DO WHILE YOU #STAYATHOME
As Thingyan mandats are cancelled, schools are closed and traveling is shut down, government advised to stay home during this time of global pandemic.
သင်္ကြန်မဏ္ဍပ်တွေလည်းမရှိတော့ဘူး၊ ကျောင်းတွေလည်းပိတ်၊ ခရီးသွားခွင့်တွေလည်းပိတ်ထားပြီး အခုလို ကမာ္ဘလုံးဆိုင်ရပ် ကပ်ရောဂါကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အစိုးရက အားလုံးကို အိမ်ထဲမှာနေဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
Yes, it’s advised that you #stayathome.
ဟုတ်ပါတယ်။ အားလုံးကို #stayathome အိမ်မှာနေကြပါ လို့ အကြံပြုထားတာပါ။
Remember, remaining inside your house isagood way to protect yourself and others from the coronavirus. But staying at home can get crazy sometimes.
So, we’ve compiled4ways to make your #stayathome interesting and productive too.
အိမ်မှာနေခြင်းက မိမိနှင့်တကွ အခြားလူတွေကို ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရန်ကနေ ကာကွယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပြုပါ။ ဒါပေမယ့် အိမ်မှာတစ်ချိန်လုံးနေနေရတာက တစ်ခါတစ်လေ သင့်ကိုရူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် OOTDMYANMAR က စိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းပြီး တိုးတက်စေဖို့အတွက် အိပ်မှာနေရင်း ပြုလုပ်နိုင်မယ့် အချက် ၄ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Work. Finish your deadlines. (အလုပ်လုပ်ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပါ။ )
Outfits from @mdsmyanmar
Read. It’s good for the soul. (စာဖတ်ပါ။ စာဖတ်ခြင်းက စိတ်အာဟာရပေးခြင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။)
Makeaclassic cocktail. We recommend mojito! (Cocktail ဖျော်ပါ။ Mojito ကို ဖျော်သောက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။)
Walk your dog at home. Make sure to wear matchy outfit. (ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရိစာ္ဆန်ခွေးလေးနဲ့ အိမ်ထဲမှာ လမ်းလျှောက်ထွက်ပါ။ ဆင်တူဝတ်စုံလေးဝတ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။)
Styled & Shot by @joamarjohn
Make up by @khaingmua
Tags Fashion, mdsmyanmar, ootdmyanmar, stayhome
COOL WAYS TO WEAR SPORTY OOTDS AT HOME
No Comments on COOL WAYS TO WEAR SPORTY OOTDS AT HOME
အိမ်မှာနေရင်း စတိုင်ထုတ်လို့ရမယ့် Sport Wear Outfit
Sweater, shorts, sweatpants, or sneakers are probably the choice of anyone’s stay home outfit. But we’re also guessing that you do want to look cool into these outfits you wear.
များ ဆွယ်တာ၊ ဘောင်းဘီတို၊ အားကစားဘောင်းဘီ ဒါမှမဟုတ် sneaker လေးတွေက အိမ်မှာနေတဲ့လူတိုင်း ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိတဲ့ ဝတ်စုံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်နေရင်းဝတ်စုံကိုမှ စတိုင်ကျကျလေး ဝတ်ချင်ကြတယ်မဟုတ်လား။
So below, we’ve collated simple yet super extra ways you can sport your OOTDs at home.
အဲ့ဒီအတွက် OOTD က ရိုးရှင်းပေမယ့် အထာကျတဲ့ အိမ်နေရင်းဝတ်စုံလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. Black on black (အနက် နဲ့ အနက်)
2. Crop top + shorts (Crop top နဲ့ အတို)
3. Sweats (အားကစားဘောင်းဘီ)
4. Nude short shorts + Boyfriend polo shirt (Nude short နဲ့ ပိုလိုရှပ် အပွ)
Photo credits @lissyroddyy
5. Cycling shorts + oversized tee (ဘောင်းဘီအတို နဲ့ တီရှပ်အပွ)
Photo credits @naychiooo_official
Tags Fashion, ootdmyanmar, sporty
No Comments on PAJAMAS FOR WORK
There’sagood chance that for the month of April we will be working from home. What else can we suggest you to wear while you work at home? Of course your silk pajama set – – – or nightgown, or robe, which have that same comfy yet luxurious balance. The cool thing about this, you don’t even have to change outfit when you go to bed, lol.
ဧပြီလ အတွက် ကံကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကတော့ တစ်လလုံး အိမ်ကနေ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်မှာနေရင်း အလုပ်လုပ်တဲ့အခါဘာတွေဝတ်ဆင်ဖို့ အကြံပေးနိုင်ဦးမလဲ။
သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး အမြင်တင့်တဲ့ ပိုးသားညအိပ်ဝတ်စုံ ဒါမှမဟုတ် ညအိပ်ဂါဝန် နဲ့ ဂါဝန်အရှည် တွေဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့ အလုပ်ပြီးလို့ ညအိပ်ယာဝင်ရင် အဝတ်လဲစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။
Anyhow, we collated pajama OOTD images for your reference! Welcome!
OOTD က ညအိတ်ဝတ်စုံလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Tags Fashion, fashioon, ootdmyanmar